Nhau - Mavhiri maviri-kufamba anofarirwa pasirese
Sekureva kweChina Tsika yekuongorora data, huwandu hweChina hwekutengesa kunze kwemaviri emavhiri emagetsi emabhasikoro apfuura mamirioni gumi kwemakore matatu akateedzana, uye achiri kukura gore rega rega. Kunyanya mune dzimwe nyika dzeEuropean neAmerica uye Southeast Asia nyika, iyo yemagetsi bhasikoro musika iri munguva yekukurumidza kukura.
Kufamba kwemaviri-mavhiri bhizinesi richava nani nemutemo
Chikonzero chemamiriro ezvinhu aya pazasi chinoratidza, kune rumwe rutivi, nekuda kwechirwere chakakomba kunze kwenyika mumakore maviri apfuura, mabhasikoro emagetsi maviri-mavhiri ndiyo nzira inosarudzika yekufambisa kwevanhu kufamba kwezuva nezuva nekuda kwenzira yekudzivirira nyika. .
Kune rimwe divi, mumakore achangopfuura, mazhinji nyika dzekunze kwenyika 'marongero akabatsira indasitiri yemabhasikoro emagetsi: kunyanya, dzimwe nyika dzeEuropean, America neSoutheast Asia dzakateedzana zvakateerana marongero erubatsiro kukurudzira vanhu kukwira.
Semuenzaniso, iyo hurumende yeDutch subsidies inogona kusvika inopfuura 30% yemari yekutenga; hurumende yeItaly inokurudzira imwe nzira yekufamba uye inopa rubatsiro kune vagari kuti vatenge mabhasikoro uye scooter, anosvika mazana mashanu euros (anenge 4000 yuan); Hurumende yeFrance yakagadzira chirongwa chekutsigira chemamirioni makumi maviri emadhora ekupa mazana mana euros pamunhu nemari yekufambisa yevashandi vanoenda nebhasikoro; hurumende yeGerman muBerlin yakaronga zvakare nzira dzemigwagwa, yakawedzera nzira dzebhasikoro dzechinguva, nezvimwewo, kuitira kuti pawanikwe kushomeka kwenzvimbo dzemabhasikoro emagetsi;
India yakabvumidza zvirongwa zvepasirese zvemabhasikoro emagetsi, uye mutero wemabhasikoro emagetsi wakadzikiswa kubva pa12% kusvika pa5%; Indonesia yakatevera maitiro emabhasikoro emagetsi; Philippines yakasimudzira zvine simba bhizimusi remagetsi bhasikoro hurumende yeVietnam yakazivisa kuti ichaita "mota inorambidzwa" munyika. Pakati pavo, Ho Chi Minh Guta richarambidza midhudhudhu kubva muna 2021.
Huwandu hwekutengesa nezve smart zvigadzirwa / e-mabhasikoro awedzera
Zvinhu zvakawanda zvakanaka zvakaunza kudzoka kukuru kubhizimusi remagetsi bhasikoro rekutengesa kunze, kunyanya musika we smart bhasikoro emagetsi. Parizvino, musika weEuropean neAmerica wemagetsi emabhasikoro uri kuchinja. Mimwe yepamusoro-yekupedzisira, yakangwara, yakachengeteka, yakasarudzika, uye epamusoro-tekinoroji emagetsi mabhasikoro anozivikanwa kwazvo pakati pevashandisi. Kukurudzira mutemo wehurumende yemunharaunda yekutsigira kwakasimudzira kutengeswa kwemabhasikoro emagetsi. Izvi zvinoitikawo kuti kubvira pakatanga chirwere ichi, makambani emagetsi emabhasiketi emagetsi uye mamwe emagetsi bhasikoro smart solution vanoramba vachiisa "kumhanya uye kuda" kwemusika wemabhasikoro emagetsi epamhiri kwemakungwa, vachiramba vachivhura mhando dzakasiyana dzehungwaru nemhinduro dzakangwara. Kumhiri kwemhiri kwemaviri-mavhiri emagetsi emabhasikoro ari kusangana nemukana wehungwaru, yepamusoro-magumo uye kudyidzana kwenyika.
Seye smart solution mupi wemabhasikoro emagetsi, TBIT yakapa nzvimbo dzekutsvagisa masevhisi evanopfuura mamirioni makumi masere evashandisi vemabhasikoro pasirese, uye huwandu hwekunze hwemagetsi emagetsi emabhasikoro akanyanya apfuura mamirioni mashanu. TBIT ndeimwe yevatengesi vepasi rose vekumisikidza michina yemabhasikoro emagetsi nemidhudhudhu.
Nekufarirwa kwemabhasikoro emagetsi akangwara mumisika yemhiri kwemakungwa, takaonawo kuti misika yekumhiri kwemakungwa ine huwandu hwakawanda hwezvinodiwa zvezvinhu zvakangwara, uye mhinduro dzakanaka dzeTBIT dzemabhasikoro emagetsi dzine musika wakakura.
Kunyanya mumazuva achangopfuura, odha dzakakwira, uye vashandi vese vari kushanda nguva yekuwedzera vasina kumbomira. Muwekishopu, vashandi vari mubishi kushanda muchina, uye gungano rese mutsetse urikufamba mushe. Mutsara wese wemidziyo wawana kushanda kwakanaka, uye zvese zvinoita senge zvakabatikana uye zvakarongeka.
Pamwe chete nekushomeka kwemachipisi emagetsi pasi rino gore rino, zvigadzirwa zvakawanda zvakawedzera, uye zvinotumirwa kubva kufekitori yeTBIT zviri kushomeka, uye chirongwa cheGPS odhi chakarongerwa kune hafu yechipiri yegore.
Iyo yekugadzira uzivi hwemhando yepamusoro uye kuendesa panguva yakakodzera inomhanya kuburikidza neyakagadzirwa rese cheni yeTBIT. Kudiwa kweMusika kuri kuchinja zuva rega rega richipfuura, uye TBIT inoshandisa yega budiriro uye hunyanzvi hwekuvandudza mhando uye kugona, uye zvishoma nezvishoma kuvaka kambani yakavimbika. TBIT inosimbirira mukugadzira zvigadzirwa zveunyanzvi uye zvakanakisa zvevatengi, uye panguva imwechete ichivimbisa mhando yezvigadzirwa, tinogona kuendesa zvakachengeteka zvigadzirwa kune vatengi.